I-Raglan Treehouse e-Woods ne-Bath yangaphandle - I-Airbnb
I-Raglan Treehouse e-Woods ne-Bath yangaphandle
392 okushiwo abanye
Raglan, Waikato, i-New Zealand
Indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Guillaume And Tara
QAPHELA : Intengo ihlanganisa zonke izinkokhelo.
Balekela kule ndlu encane yezihlahla ehlathini, 4kms ukusuka eWhale Bay kanye ne-12km ukusuka eRaglan. Nqamula futhi ushaje kabusha. Phila kalula. Phefumula emvelweni. Jabulela ukuphila ngaphandle kwegridi futhi uthathe ikhefu kubuchwepheshe. I-treehouse yakhiwe ephayini endaweni yethu engamahektha angama-35 futhi inombono omangalisayo phezu kwamadlelo, ihlathi lendabuko kanye nolwandle. Lokhu ukuphunyuka kwansuku zonke. Okwabathandanayo abasebasha (enhliziyweni), abasafufusa
Jabulela ukubaleka kwezothando nomuntu okhethekile empilweni yakho kule ndawo ekhetheke kakhulu. Iphelele kulabo abafuna i-adventure, isipiliyoni esikhethekile hhayi nje indawo yokuhlala.
• Ikhishi elincane, elihlome ngokuphelele elinosinki kanye netop yokupheka yegesi.
• Indlu yokugezela enhle nehlanzekile eneshawa eshisayo nendlu yangasese eshaywayo.
• Isofa elithokomele elakhelwe kusofa elingasetshenziselwa ukutotoba (noma isivakashi esengeziwe).
• Umbhede we-futon olingana nendlovukazi egumbini eliphezulu (enelineni eliwumbhede kanokusho) onombono omangalisayo ngaphandle kwefasitela oya olwandle. Sibeka ama-duvethi amabili embhedeni ebusika ukuze kufudumele futhi kuthokomele.
• Izibani eziningi ze-LED ezisebenza ngebhethri, kanye nehitha yegesi ebusuku obubandayo (sicela uqaphele ukuthi i-treehouse ivaleleke ngokuphelele).
• Ifriji encane yomgqomo obandayo kanye nomgqomo obandayo (Isitulo Esipholile) ukusiza ukugcina ukudla kwakho neziphuzo kubanda.
• Isitezi esikhulu esinokugeza kwamanzi ashisayo ngaphandle, itafula elincane, izihlalo zedesika kanye ne-BBQ yokudlela yangaphandle nokuphumula.
• Morning Glory ikhofi eziphilayo, itiye noshukela, amafutha omnqumo
• Wonke amalineni ombhede, amathawula, izindwangu zezitsha, nemikhiqizo yokuhlanza.
• Ishampu ye-Ecostore NZ, i-conditioner, ukugeza umzimba nokugeza izandla
• Amakhandlela, omagazini nezincwadi.
• Futha izimbungulu ukuze ugweme izimbungulu
• I-detox evela kubuchwepheshe, uma ukhetha, akukho ukumbozwa kweselula ku-treehouse kodwa ungakwazi ukuxhuma ku-WIFI kwezinye izindawo ukusuka ku-treehouse.
• Isipikha se-Bluetooth se-UE sokulalela izingoma zakho ezilandiwe.
Bheka Izinto Ezinhle Okufanele Uzenze Kubhulogi ye-Raglan ku-Tiny House Escapes.
Uma i-Treehouse ingatholakali ngezinsuku ozifunayo:
Silandele ku-@TinyHouseEscapesRaglan ukuze uthole izaziso ngokukhansela.
Noma hlola ezinye izinhlu endaweni efanayo, i-Airbnb/h/raglanlovebus kanye ne-Airbnb/h/raglanlovenest
Silandele @TinyHouseEscapesRaglan ukuze uthole izaziso ngokukhansela uma izinsuku ozifunayo zingatholakali.
Izinga lethu libandakanya konke.
SICELA UQAPHELE: Lena yindlu yezihlahla, eyakhelwe (naphakathi) nezihlahla zikaphayini. Uma kunomoya, izihlahla zizoklabalala eduze kwakho. Ngeshwa akukho esingakwenza ngesimo sezulu esinomoya. Izisekelo ze-treehouse zakhiwe ngendlela ecaciswe ngunjiniyela Wesakhiwo Obhalisiwe futhi i-treehouse inemvume egcwele evela kuMkhandlu, ngakho-ke isakhiwo siphephile.
Kunezinto eziningi ezijabulisayo ongazenza ngenkathi unathi futhi sikushiyele imibono embalwa endlini yezihlahla. Enye yalezi zinto ihlathi/umfudlana omuhle (endaweni yethu) phansi ubheke eweni/ulwandle, ukuya esihlahleni esikhulukazi esidala sePuriri lapho ungathola khona ipikiniki. Uzohamba ensimini, bese udabula ehlathini lendabuko futhi wehlele emfudlaneni, udlule impophoma bese uya esihlahleni sePhikhinikhi. Uhambo luzokuthatha imizuzu eyi-15 ukuya kwengama-20 ukufika lapho futhi izinga elimaphakathi kuya kolukhuni elinezigaba ezehlayo/ezingamagquma. Uma ufuna ukwenza lokhu sicela uphathe izicathulo ezifanele zokuhamba.
4.88 out of 5 stars from 392 reviews
4.88 · 392 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-392
Sitholakala onqenqemeni lweNtaba iKarioi, 4km nje ukusuka ezindaweni ezidumile zokuntweza e-Raglan; I-Manu Bay, i-Whale Bay kanye nezinkomba. I-Te Toto Gorge iphezulu nje ngomgwaqo. Sinohambo olufushane, oluhle lwasehlathini endaweni yethu futhi kukhona nezindawo zokuhamba zasehlathini zeMt Karioi ezifinyelelwa ku-Te Toto Gorge kanye ne-Institute of Awesome kuWhaanga Road.
Ibungazwe ngu-Guillaume And Tara
Sithanda ukushiya izivakashi zethu endaweni yazo yangasese ukuze singezi sizokubona ngaphandle uma kufanele. Uma kukhona okudingayo ngesikhathi sokuhlala kwakho sicela uzizwe wamukelekile ukuza endlini yethu etholakala amanye amamitha angu-800 phansi komgwaqo.
Sithanda ukushiya izivakashi zethu endaweni yazo yangasese ukuze singezi sizokubona ngaphandle uma kufanele. Uma kukhona okudingayo ngesikhathi sokuhlala kwakho sicela uzizwe wamuk…
Hlola ezinye izinketho ezise- Raglan namaphethelo